Inkathi izingubo ezimnyama ngalo yaqala ngala obhekwe imfashini owesifazane emangalisa - Feroz Shanel. Kuyinto ngenxa yakhe futhi "dress black kancane" wakhe, saphela uphawu yokulila, ukudabuka nosizi. Black igqoka - one of the best nabangane nezesifazane, ungase uhambisane njengethuba phakathi nesonto abavamile, futhi ngesikhathi soiree.
Lokhu umbala omnyama kuyinto jikelele. Akudingi izingxenye extra: ngekhono lakhe bangaba undab 'uzekwayo. Okungenani lihambisana umsebenzi black yobuciko kuyoba indlovukazi yangempela kusihlwa.
Ngamunye isizini imfashini presents yizimanga eziningi ezithakazelisayo. Abaklami abadumile emhlabeni wonke ukunikeza dress black nge ezintsha yayo, omisiwe futhi nemininingwane ethakazelisayo.
Black kusihlwa dress: Indwangu esobala and lace
Black umbala - uphawu lobuhle nokubukeka futhi ukunambitheka. Kodwa uqala ukudlala ngendlela entsha lonke lapho kusetshenziswa eyodwa eqenjini lomculo we ukwakheka okuhlukene kanye izindwangu. ubukhazikhazi Special unamathisele kubo ezihlukahlukene inhlanganisela lace futhi tangle ehlotshisiwe satin ayevumela futhi chiffon.
izingubo ezimnyama Long ngalé elula uya ngokuqinile phezu sibalo, ithungwe kusukela olulodwa noma ezimbili chiffon kwabantu kuhlukile El Saab, kukhanye ngomqondo ongokoqobo yegama elithi. Dark, lace kuhle anolaka, okuyinto kwakhiwa amagagasi futhi curls phezu kwawo wonke ubude, kakhulu ngekhono futhi kahle kuhlangene rhinestones emangalisayo Lihle okuxekethile, elikhazimulayo kukhanye obukhethekile ukukhanya sosuku izibani ku nengemuva elimnyama.
Dlala black ingubo kusukela Valentino babe phezulu sasivumela nesizotha futhi phansi nolwelwe engalingani. Ziyakwazi kuphela ngamadolo kancane ovulekile futhi ingqwababa, futhi evumelanisa bakhe iyisibonelo yangempela wokuba nesizotha. Nokho, i-sexy imodeli ekhethekile unika black esobala, okuyinto basondela amaphethini egeleza, okusikhumbuza imigqa kanti amacembe duo.
Futhi ukubukeka sexy futhi umkhiqizo kusuka Valentino ezihambisana isibonelo esihle e inhlanganisela zicatshangwe. Dress bustier falling ngokukhululekile ngezansi nje kwamadolo, elinendawo ubukeka iduku-izimpawulo eyenziwe ubuchwepheshe obufanayo. Kuyinto lo mniningwane linikeza isithombe asibusise ngokuphelela nangokuphila imfihlakalo.
Lokhu umbala linezincazelo ezihlukahlukene ukujula: ezinye hamba eduze grey, kanti abanye abafana okwesibhakabhaka isibhakabhaka ebusuku. Abaklami uncamela olujulile kweqiniso umbala omnyama te.
A ifomu elula: phezulu, esehlanganise ngokuphelele esifubeni, ezizibeni mncane kakhulu futhi isiketi-trapezium, ukwandisa kakhulu phansi, odlala indlela entsha ngokuphelele ngokusebenzisa Indwangu ocebile nge kukhanye zasebukhosini. Lawa - ephelele black ingubo ngu Armani.
Izacile-izinga ijezi - nje indwangu enjalo ekhetha Gaultier ezithombe zakhe kusihlwa igqoka. Sihlezi Phezu sibalo nokugcizelela bonke Curves yomzimba, ke ikhanga engavamile naikiweko bodice kanye indwangu nolwelwe.
Ukwehlukahluka kwezimangaliso imiklamo nokuma izingubo kuyahlukahluka ngempela omunye indlela, uma kuba black sikhethelwe kube nombala wako. Elegance, isitayela kanye neziphathelene nezocansi, ngisho noma ivaliwe ngokuphelele - yilokho black kusihlwa dress.
Yini ukugqoka nge jeans nge okhalweni okusezingeni eliphezulu? amathiphu amantombazane
Sifunda Umkhuba omusha fresh - ingubo eluhlaza phansi
Nezingubo kusuka Turkey etholakalayo wonke umuntu!
Azerbaijan: izinto ezikhangayo ukuze angabonwa
Usuku luka-Valentine. umlando iholide
Kuyini backorder? Ngazi kanjani uma yena lesizinda khulula
Imifanekiso ye-Sufi nefilosofi
Anissan x umzila Izibuyekezo nabanikazi. Kubuyekeziwe Nissan X Inqola 2011